कारखानाको विषालु रसायनले सिंगै गाउँ क्यान्सर पीडित ! – NewsAgro.com
Main News उपभोक्ता स्वास्थ्य
May 14, 2017 May 15, 2017 newsagro कारखानाको विषालु रसायनले सिंगै गाउँ क्यान्सर पीडित, मानव वस्ती नजिक खोलिएका उद्योगको असर
यो समाचार 908 पटक पढिएको
मानव वस्ती नजिक खोलिएका उद्योगको असर
• सुमनराज पन्त
काठमाडौं । पैसा ठूलो कि स्वास्थ्य रु अहिले यो प्रश्नले भारतको केरला सरकार द्विविधामा छ । त्यहाँ खुलेका कारखानाहरु राज्यकै सर्वाधिक कमाइ दिने स्रोत भएका छन् । तर, अर्कातिर तिनै कारखानाले उत्सर्जन गर्ने विषालु रसायनका कारण हजारौं नागरिकको स्वास्थ्य संकटमा परेको छ । २० भन्दा गाउँका बासिन्दा क्यान्सरजस्ता जटिल रोगले प्रभावित भएका छन् । कारखानानको प्रभाव क्षेत्रमा रहेको गाउँ नै क्यान्सर भएको भन्दै यी वस्तीका बासिन्दाले अरु जिल्ला र गाउँतिर विवाह गर्ने वरवधुसमेत पाउन समस्या भएको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन् ।
केरलाको कोल्लम जिल्लास्थित चावरा खण्ड र आसपासका २० वटा गाउँ विषालु रासायनिक पानी बगिरहेको छ । पानीसँगै विषालु ग्यास पनि । चावरास्थित सरकारी स्वामित्वको केरल मिनरल्स एण्ड मेटल्स लिमिटेडबाट उत्सर्जन हुने विषालु रसायनले वर्षौंदेखि हजारौं बासिन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । सन् १९८४ देखि कारखानाबाट विषालु रसायन उत्सर्जन गरिरहेको छ । ती रसायन व्यवस्थापन नगरी खुलेआम बगाउने गर्दा समस्या आएको हो । यसमा तेजाब, आइरन अक्साइडलगायतका रसायन मिसिएको हुन्छ । जसको संक्रमणले क्यान्सर, छाला, स्नायु, पाचनजन्य रोगहरु सिर्जना गर्दछ ।
यो कारखानाले इल्मेनाइटबाट टाइटेनियम डाई अक्साइड बनाउने गर्दछ । इल्मेनाइट खानी चावरापट्टी गाउँमा छ । विषालु रसायन घरायसी प्रयोग हुने कुवा, तलाउ र इनारमा समेत प्रवेश गर्नाले स्थानीय बासिन्दा जोगिन सकेका छैनन् । विषालु रसायनकै कारण वनस्पतिहरु नाश भएका छन् । गाउँ मरुभूमि बन्दै गएको छ ।
चित्तुरकी ५८ वर्षीया विजया शास्त्रीय गायिका हुन् । उनी अहिले गाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेकी छिन् । यही विषालु धुँवा र पानीले उनको घाँटी थलिएको छ । अहिले उनी इन्हेलरको सहायताले पनि श्वास लिन सक्दिनन् ।
स्थानीय संगठन प्रदूषण क्षेत्र कल्याण सोसाइटीका सचिव डा सुरेश कुमार पछिल्लो २० वर्षदेखि करिब २० गाउँका बासिन्दामा क्यान्सरको संक्रमण फैलिएको बताउँछन् । क्यान्सर फैलिएको गाउँ भनेपछि चेलिबेटीको विहे हुन छाडेको उनको भनाइ छ ।
४८ वर्षीया लीलाले चार महिनाअघि स्तन क्यान्सरको शल्यक्रिया गराइन् । उनी कारखानानजिक बस्ने गरेको र कारखानाले विषालु धुँवा, रसायनको कारण आफू रोगी भएको बताउँछिन् । ‘मेरो विकल्प छैन, पति पनि यहीं काम गर्छन्’ उनी भन्छिन् । अहिले उनको टाउको दुख्ने र छाला एलर्जी पनि भइरहेको छ । कारखानाकै कारण माझीको रोजीरोटी पनि गुमेको छ । ६० वर्षीया पी सुभाषिनी स्थानीय वटक्कयाल दहमा विषालु रसायन भरिएपछि माछा हुन छाडेको छ । ५९ वर्षीया राधाकृष्ण पिल्लै खेतभरि विषालु रसायन फैलिएपछि धान फल्न रोकिएको बताउँछन् । खेतभरि आइरन अक्साइड फैलिएको कारण खेत स्थायी मरुभूमि भएको उनको विश्लेषण छ । विषालु रसायनकै कारण दुई हजार ५ सय परिवारले गाउँ छोडिसकेका छन् । शिशुहरुमा पनि छाला संक्रमण हुने गरेको छ ।
अब त्यहाँका बासिन्दालाई अदालतको मात्र भर लागेको छ । हालै मानवअधिकारवादी कार्यकर्ता जोय काइथरतले उक्त कारखानाले विषालु रसायन फैलाएको र मानवीय अस्तित्व संकटमा परेकोमा मुद्धा दायर गरेका छन् । तर राज्य सरकार यो कारखाना प्रतिवन्ध गर्न चाहँदैन । किनकी राज्य सरकारको मुख्य आयस्रोत यही कारखाना हो । राज्य सरकारले हरेक वर्ष एक एक अर्ब २० करोड भारु यही कारखानाबाट पाउँछ । त्यसैले राज्य सरकारका लागि अहिले टाउको दुखाइ भएको छ, आय गुमाउने कि नागरिकको स्वास्थ्य गुमाउने बारे ।
हुन त नेपालमा पनि कारखाना आसपसा यस्तो अवस्था आउने गरेको छ, तर अध्ययनको कमीले तथ्य बाहिर आउन सकेको छैन । भारतको यो एउटा घटनाबाट पनि हामीले जानकारी लिन सक्छौं कि औद्योगिक विकासको ‘बोझ’ निकै कष्टदायी हुँदोरहेछ।
← स्थानीय तह अन्तर्गत कृषिले पाउने भयो, पौने दुई करोडसम्मको बजेट
स्थानीय तह निर्वाचन : तीन प्रदेशको ३४ जिल्लामा ७३ प्रतिशत मतदान →
माटोबिनै फलाइन्छ स्वादिला तरकारी !
११ महिनामा १० लाख पर्यटकको आगमन
December 14, 2018 newsagro 0